DAM3 kpụrụ Case Circuit emebi Manufacturers & Suppliers - China DAM3 kpụrụ Case Circuit emebi Factory
Kpụrụ Case Circuit emebi (MCCB)
DAM1 Kpụrụ Case Circuit emebi
Kwes Bugharịa Ọrụ Ofu Mdị MCCB
Kọmputa Typedị MCCB
Kwes Ma Magnetik kemeghi Type MCCB
Kwes Kemeghi Type MCCB 0.7-1in
DAM3 Kpụrụ Case Circuit emebi
DAM4 Kpụrụ Case Circuit emebi DPX
DAM5 Kpụrụ Case Circuit emebi 3VL
DAM7 Kpụrụ Case Circuit emebi ABE
DAM8 Kpụrụ Case Circuit emebi ABN
DAM9 Kpụrụ Case Circuit emebi NF
DAM10 Kpụrụ Case Circuit emebi NS
Miniature Circuit emebi (MCB)
Nova Series Miniature Circuit emebi
DAB6-63 Miniature Circuit emebi
DAB7-63 DC Miniature Circuit emebi
DAB6-100 Miniature Circuit emebi
DAB7-100 Miniature Circuit emebi
DAB7-125 Miniature Circuit emebi
DAB7-63 Miniature Circuit emebi
C45 Miniature Circuit emebi
Mmapụta Ugbu Circuit emebi na overcurrent Protection (RCBO)
DABL-63 Kọmputa RCBO
Mmapụta Ugbu Circuit emebi (ELCB & RCCB)
DAB6LE-63 EarthLeakage Circuit emebi
DAF360 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL1-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL2-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL3-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL4-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL5-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL6-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL7-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL8-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
DAL9-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
Dal10-63 Residual Ugbu A Circuit emebi
Earth leakage Circuit emebi (ELCB)
DAM1L-125 Earth Leakage Circuit emebi CBR
DAM1L-160 Lewa Leakage Circuit Breaker CBR
DAM1L-250 Earth leakage Circuit emebi CBR
Air Circuit emebi （ACB）
Motor Protection Circuit emebi (MPCB)
Igbe Mgbasa Module
MPH Igbe Mkpokọta Busbar
Circuit emebi ngwa
Air Circuit emebi
DAB7LN-40 usoro DPN Residu ...
DAB7-63 Nova usoro Miniatu ...
DAM3-160 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Nchịkọta nke DAM3-160 MCCB nke a na-akpụzi nke na-emebi emebi Ihe ndọtị mkpuchi nke Dada DAM3-160 nke a kpụrụ akpụ nwere ike iru 100V. Ngwaọrụ eletriki ndị a kwesịrị ekwesị maka sekit na-ekesa ike na nke ọzọ nke 50-60Hz, voltaji na-arụ ọrụ ruru 750V, ma gosipụta ọrụ ugbu a site na 10A ruo 100A. The circuit emebi na-arụ ọrụ dị mkpa na-ekesa ike ma na-echebe circuit na ike ngwá si overloading, obere sekit na sekit, na un ...
DAM3-250 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Isi nke ugbu a akara akara nke Dada DAM3-250 nke akpụzi ihe na-emebi emebi nwere ike iru 250A. Ngwaọrụ eletriki ndị a kwesịrị ekwesị maka sekit ike na-ekesa ya na ụzọ ọzọ nke 50-60Hz yana akara ngosi na-arụ ọrụ ugbu a na 1000A. Enwekwara ike iji ha na igwe eletriki eletrik maka nchedo na-adịkarịghị adị na ibubighachi ya yana nchebe pụọ na mkpirisi ikuku na ọnọdụ ọkụ. E jiri ya tụnyere usoro DAM1, a na-ahazi usoro DAM3 maka obere olu, dị elu ...
DAM3-400 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Isi nke ugbu a akara akara nke Dada DAM3-400 nke a kpụrụ akpụ nke nwere ike iru 400A. Ngwaọrụ eletriki ndị a dị mma maka nchedo elekere nkesa nke nwere ike na-agbanwe agbanwe nke 50-60Hz na akara ngosi na-arụ ọrụ ugbu a na 1000A. Enwekwara ike iji ha na igwe eletriki eletrik maka nchedo na-adịkarịghị adị na ibubighachi ya yana nchebe pụọ na mkpirisi ikuku na ọnọdụ ọkụ. Tụnyere usoro DAM1, a na-ahazi usoro DAM3 maka obere ...
DAM3-1000 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Isi nke ugbu a akara akara nke DAM3-1000 kpụrụ ikpe circuit emebi nwere ike ruo 690A, ọ na-adịkarị eji na ike na-ekesa circuit iji kesaa ike ma chebe circuit na ike na ngwa si overloaded, obere circuit, n'okpuru voltaji ọdịda mmebi, na nke e nwere ugbu a -60Hz, gosiri 1000A nke ugbu a. E jiri ya tụnyere usoro DAM1, a na-ahazi usoro DAM3 maka obere olu, ikike na-agbasawanye elu, na-enye ezigbo nchekwa ego. Ngalaba eletriki nke DAM ...
DAM3-1600 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Isi ihe Nlekọta akara akara nke Dada DAM3-1600 kpụrụ akpụ nke ga - agaru 1600A. Ngwaọrụ eletriki ndị a dị mma maka nchedo elekere nkesa nke nwere ike na-agbanwe agbanwe nke 50-60Hz na akara ngosi na-arụ ọrụ ugbu a na 1000A. Enwekwara ike iji ha na igwe eletriki eletrik maka nchedo na-adịkarịghị adị na ibubighachi ya yana nchebe pụọ na mkpirisi ikuku na ọnọdụ ọkụ. Tụnyere usoro DAM1, a na-ahazi usoro DAM3 maka sm ...
DAM3-630 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Isi nke gosiri ugbu a nke DAM3-630 kpụrụ ikpe circuit emebi nwere ike iru ruo 630A. Ngwaọrụ eletriki ndị a dị mma maka nchedo elekere nkesa nke nwere ike na-agbanwe agbanwe nke 50-60Hz na akara ngosi arụ ọrụ ruru 1000A. Enwekwara ike iji ha na igwe eletriki eletrik maka nchedo na-adịkarịghị adị na ibubighachi ya yana nchebe pụọ na mkpirisi ikuku na ọnọdụ ọkụ. The circuit emebi na-egosipụta njirimara nke obere olu, elu b ...
Kpụrụ Case Circuit emebi
Miniature circuit emebi
Mmapụta ugbu a na overcurrent nchedo
Mmapụta Ugbu Circuit emebi